Yan Aung: ဒိုင်ယာရီထဲက အိပ်မက်စာမျက်နှာများ
ကျွန်တော်ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘ၀တုန်းက အိပ်မက်လေးတွေ မက်ခဲ့ဖူးတယ်. မနက်မိုးလင်းတော့ အမေ့ကို ဖက်ပြီး ညက မက်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်ထဲမှာ ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘယ်နေရာတွေကို သွားရကြောင်း၊ ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ကြောင်း၊ ဘယ်လိုအစားအစာတွေကို စားရကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြန်ပြောလေ့ရှိခဲ့ဖူးတယ်. အိပ်မက်လေးတွေက ကောင်းရင် အမေက ကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြီး စိုက်ကြည့်နေတတ်သလို ကျွန်တော့် အိပ်မက်တွေက မကောင်းခဲ့ရင်တော့ အမေက ကျွန်တော့်ခေါင်းလေးကို ပုတ်ပြီး 'အိပ်မက်ဆိုတာ ပြောင်းပြန်ယူရတယ် သားရဲ့' လို့ နှစ်သိမ့်အားပေးတတ်တယ်.
ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်လာတော့လည်း အိပ်မက်တွေ ဆက်မက်နေခဲ့တုန်းပဲ. အိပ်မက်လေးတွေကောင်းရင် အမေ့ကို ပြောပြပြီး သားအမိနှစ်ယောက် ကြည်ကြည်နူးနူး ရယ်မောတတ်ကြပေမယ့် အိပ်မက်ဆိုးတွေ မက်ခဲ့ရင်တော့ ကျွန်တော် အမေ့ကို ပြန်မပြောဖြစ်တော့ဘူး. အဖေမရှိတော့တဲ့ အမေ့ဘ၀လေးထဲကို ကျွန်တော့်အိပ်မက်ဆိုးတွေနဲ့ အကျည်းမတန်စေချင်တော့လို့ပါ.
အိပ်မက်ဆိုးတွေကို ပြောင်းပြန်ယူပြီး အိပ်မက်ကောင်းတွေကို အတည့်ယူတတ်တဲ့ အကျင့်လေးတစ်ခုကိုတော့ ကျွန်တော် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနေခဲ့တုန်းပါပဲ.
ကျွန်တော်အိမ်နဲ့ခွဲခွာပြီး အဝေးတစ်နေရာမှာ ဘ၀ခရီးကို တစ်ယောက်တည်း ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေခဲ့ချိန်မှာလည်း အိပ်မက်တွေက ကျွန်တော့်စိတ်ကူးအစဉ်ကို နေရာယူထားဆဲပါပဲ. ဒီအိပ်မက်တွေထဲမှာတော့ နန်းတော်ကြီးတွေ မရှိတော့ဘူး. နတ်သမီးလေးတွေ ပျော်ရွှင်စွာ ကခုန်သီဆိုနေတာလည်း မရှိတော့ဘူး. စားကောင်းသောက်ဖွယ် အလျှံပယ်တွေလည်း ပန်းကန်လေးတွေထဲမှာ အဆင်သင့် ရှိမနေတော့ဘူး. ကိုယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်ရတဲ့ မိသားစုမောင်နှမ ချစ်သူခင်သူ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေကြားထဲမှာလည်း ကိုယ်ရှိမနေခဲ့တော့ဘူး....
အဝေးရောက်အိပ်မက်တွေက ပိုပြီး သဘာဝကျလာခဲ့တယ်. ပိုပြီး လက်တွေ့ဆန်လာခဲ့တယ်. ပိုပြီး ရှတ လာခဲ့တယ်. ပိုပြီး စိန်ခေါ်လာခဲ့တယ်.
ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ခရီးတလျှောက်မှာ ကျွန်တော်လျှော့တိလျှော့ရဲ အမှတ်အသားလုပ်ခဲ့တဲ့ မှတ်တိုင်တစ်ချို့ရှိတယ်. နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစိုက်ထူခဲ့တဲ့ ကျောက်တိုင်တစ်ချို့လည်း ရှိတယ်. မိုင်တိုင်အမှတ်အသားတွေ များပြားလာခဲ့သလို အတွေ့အကြုံစာမျက်နှာတွေလည်း ထူထဲလာခဲ့တယ်.
အဲဒီ့နေ့က ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ မှတ်တိုင်တစ်ချို့ဆီကို ကျွန်တော်ပြန်ပြီး လှမ်းမျှော်ကြည့်ခဲ့ဖြစ်တယ်.
အဲဒီ့နေ့က ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီထဲက အိပ်မက်ဟောင်းတစ်ချို့ အပြင်လောကကို လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်.
အဲဒီ့နေ့က ကျွန်တော် မီးရောင်စုံတွေနဲ့ လှပထည်ဝါနေတဲ့ မြို့တော်ကြီးတစ်ခုမှာ ရှိနေခဲ့တယ်.
တွေးသွားလေးတွေနဲ့အတူ စည်းချက်ညီစွာ အလိုက်သင့်ကခုန်နေတဲ့ ရေပန်းလေးတွေရယ်၊ လေပြည်အသုတ်မှာ စိုးရွံ့စွာ ယိမ်းနွဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပန်းခြုံလေးတွေရယ်၊ ဘယ်သူကမှ ဂရုမပြု လျစ်လျူရှုခံထားရတဲ့ လပြည့်ဝန်းကြီးရယ်၊ ဥဒဟို လူးလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ လူတွေကို တိတ်ဆိတ်စွာ ငေးကြည့်နေတဲ့ လှေကားထစ် ဖြူဖြူလေး သုံးခုရယ်၊ ကျွန်တော့်အပေါ် သိပ်ကောင်းခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရယ်၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ရယ် အဲဒီ့ညက စကားလက်ဆုံကျခဲ့ကြတယ်.
လူငယ်တစ်ယောက် နှစ်ပေါင်းများစွာ မက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုကို တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင်တစ်ပုဒ်လို သူတို့ စိတ်ဝင်တစား နားထောင်ခဲ့ကြတယ်.
မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီ့နေ့က ကျွန်တော် အမေ့အိမ်နဲ့ဝေးကွာခဲ့တာ ခြောက်နှစ်တင်းတင်းပြည့်ခဲ့တယ်.
ဒီနှစ်အတွက် ရတဲ့ ခွင့်နှစ်ပတ်ကို တစ်ပတ်စီ ခွဲယူမယ်လို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်. ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ ကိုယ့်အတွက် အပန်းလည်းပြေ၊ ဗဟုသုတလည်းရ၊ အကျိုးလည်းရှိမယ့် ခရီးစဉ်တစ်ခုကို ကျွန်တော်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်. တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာဒေသလည်း ဖြစ်ရမယ်. ကိုယ်သုံးမယ့် ငွေကြေးပမာဏဘောင်အတွင်းမှာလည်း ရှိရမယ်. ရာသီဥတု အနေအထားနဲ့လည်း ကိုက်ညီရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်သုံးချက်နဲ့ စိစစ်လိုက်တော့ ကျွန်တော် ဘယ်ကိုသွားချင်နေခဲ့တယ်၊ ဘယ်ကိုသွားသင့်တယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပေါ်လွင်လာခဲ့ပါတယ်.
ကျွန်တော် အနောက်ဖက်ကမ်းခြေ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကို သွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်.
တကယ်တော့ ကယ်လီဖိုးနီးယားကို ကျွန်တော်သွားချင်နေခဲ့တာ အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ. ဒါဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အိပ်မက်ခရီးစဉ်တစ်ခုပါ. ကျွန်တော်ကယ်လီဖိုးနီးယားကို ငါးတန်းနှစ်ကတည်းက သွားချင်နေခဲ့တာဆိုရင် ရယ်စရာတစ်ခုလို မြင်ကြမလားပဲ.
ကျွန်တော်ငါးတန်းနှစ်တုန်းက တစ်ရက်မှာ အဖေ့ရဲ့ စာအုပ်စင်ကို ခါတိုင်းလိုပဲ မွှေနေခဲ့ဖူးတယ်. အဲဒီ့မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ စာအုပ်လေးတစ်အုပ် ဒေါက်ခနဲ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်. ကောက်ယူပြီး ကြည့်လိုက်တော့ မျက်နှာဖုံးမှာ သိပ်ကိုလှပခန့်ညားတဲ့ တံတားကြီးတစ်စင်းကို တွေ့လိုက်ရတယ်. အောက်မှာရေးထားတာက "Golden Gate" Poems တဲ့...
အဖေ့ဆီကို အဲဒီ့စာအုပ်လေးယူသွားပြီး မေးကြည့်တော့ အဖေက ဂိုးလ်ဒင်းဂိတ်တံတားကြီးရဲ့ ကြီးကျယ်လှပပုံအကြောင်းကို အကျယ်တ၀င့်ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်. ခနော်ခနဲ့ ကြိုးတံတားလေးတွေကိုပဲ တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျွန်တော် ဂိုးလ်ဒင်းဂိတ်ကြိုးတံတားကြီး အကြောင်းကို ကြားလိုက်ရတော့ ရင်သပ်ရှုမော ဖြစ်ခဲ့မိတယ်. ကျွန်တော် အဲဒီ့နေ့က အဖေ့နားမှာ ထိုင်ပြီး ဂိုးလ်ဒင်းဂိတ်ဆိုတာကို အခေါက်ပေါင်းများစွာ ပါးစပ်က တိုးတိုးလေးရေရွတ်နေခဲ့ဖူးတယ်.
ကျွန်တော် ဒီနိုင်ငံထဲကို စ၀င်လာတော့ ဆန်ဖရန်စစ်စကိုမြို့မှာ အရင်ဆင်းရပါတယ်. အဲဒီ့တုန်းက မှတ်မိသေးတယ်. လေယာဉ်ကြီးက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သမုဒ္ဒရာရေပြင်ကျယ်ကြီးနဲ့ နီးကပ်လာနေရာကနေ မြူခိုးမြူမှုန်တွေကြားက ဘွားခနဲ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အနီရောင် ဂိုးလ်ဒင်းဂိတ်တံတားကြီးကိုမြင်လိုက်ရတော့ ကျွန်တော် ခေတ္တခဏ အသက်ရှူရပ်တန့်သွားရလောက်တဲ့အထိ နှစ်သက်မိန်းမောခဲ့ဖူးတယ်. ဒါအိပ်မက်မဟုတ်ဘူး. ဒါတကယ်ဖြစ်နေတာ ဆိုပြီးတော့လည်း ကိုယ့်လက်ကိုယ် ပြန်ပြီး ဆွဲဆိတ်ခဲ့ဖူးတယ်. ပြီးတော့ တစ်နေ့မှာ ဒီတံတားကြီးရှိတဲ့နေရာဆီကို ပြန်လာပြီး အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဦးမယ်လို့ တေးထားခဲ့ဖူးတယ်.
ကျွန်တော် လူ့ဘ၀အမောတွေထဲမှာ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေခဲ့ရင်းက ကျွန်တော့်အ်ိပ်မက်တွေကို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်နေခဲ့ရတယ်.
အဲဒီ့နေ့က ကျွန်တော့်ဒိုင်ယာရီစာအုပ်လေးရဲ့ ဟိုးရှေ့ဖက်ခပ်ကျကျ စာမျက်နှာလေးဆီကို ပြန်လှန်ဖြစ်ခဲ့တယ်.
ပြီးတော့ စကားလုံးလေးနှစ်လုံးရဲ့ ဘေးနားမှာ အမှတ်ကလေးနှစ်ခုခြစ်ခဲ့လိုက်တယ်.
အဲဒီ့စာမျက်နှာလေးနဲ့ နှစ်ရွက်ကျော်လောက်မှာ ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုခွဲပြီး ရေးထားတဲ့ လူနာမည်တစ်ချို့ ရှိပါသေးတယ်.
အဲဒီ့နာမည်လေးတွေထဲက လူတစ်ယောက်နာမည်ကို ကျွန်တော်ရွေးပြီး သူ့နာမည်လေးဘေးနားမှာ အမှတ်လေးတစ်ခု ခြစ်ခဲ့လိုက်တယ်.
သူ့နာမည်က မိုးမြင့်မာန်... (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက် နာမည်လွှဲပြောင်းရေးထားပါသည်.)
မိုးမြင့်မာန်က ကျွန်တော့်ရဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းပါ. သူက ဒီနိုင်ငံကို ကျွန်တော့်ထက် လေးနှစ်လောက်စောပြီး ရောက်ခဲ့တယ်. သူက ကျွန်တော့်ဘ၀အတွက် အရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ ရပ်တည်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ဆိုရင် မမှားပါဘူး. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် ဘ၀ကို တစ်ယောက်တည်း ခက်ခက်ခဲခဲ ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရချိန်မှာ သူ ကျွန်တော့်ကို ကျေးဇူးပြုခဲ့ဖူးတယ်. သူ့အတွက် အမှတ်မထင် ဖြစ်ခဲ့ရပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အမှတ်တရ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်. သူက ပေးသူ. ကျွန်တော်က ယူသူဖြစ်နေခဲ့တာလည်း တစ်ပိုင်း. သူက မျှဝေသူ. ကျွန်တော်က လိုအပ်နေသူ ဖြစ်ခဲ့တာလည်း တစ်ပိုင်းရယ်ပေါ့.
ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကို ပညာတော်သင်ဆုနဲ့ ရောက်လာခဲ့ရတာဆိုပေမယ့် အပြည့်မရခဲ့ပါဘူး. တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ရှစ်ထောင်လောက် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်စိုက်ရမှာပါ. Full Tuition Scholarship လို့ဆိုတဲ့ ကျောင်းစရိတ်ပညာတော်သင်ဆုကို အပြည့်ရခဲ့ပေမယ့် Room and Board လို့ဆိုတဲ့ နေထိုင်စရိတ်နဲ့ စားစရိတ်ကို ကိုယ့်အိတ်ထဲကပဲ စိုက်ထုတ်ရမှာပါ. ကံကောင်းချင်တော့ Work Study လို့ဆိုတဲ့ ကျောင်းမှာပဲ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရအောင် ဖန်တီးပေးထားပြီး အဲဒီ့အလုပ်က ရတဲ့ လုပ်အားခနဲ့ ကျောင်းစရိတ်တစ်ချို့တစ်ဝက်ကို ပေးချေနိုင်တဲ့ အစီအစဉ်ကိုလည်း ကျွန်တော်ရထားပါတယ်. အဲဒါက တစ်နှစ်လုံးအတွက် ဒေါ်လာ ၂၈၀၀ နဲ့ ၃၀၀၀ ကြားမှာ ရှိပါတယ်. အဲဒီ့တော့ ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ လောက် ကွာနေတုန်းပါပဲ. ပြီးတော့ ကျောင်းမှာ ကျန်းမာရေးအတွက် အာမခံ (Health Insurance) ကိုလည်း မ၀ယ်မနေရ ၀ယ်ရပါသေးတယ်. အဲဒါက ဒေါ်လာ ၄၀၀ ကျော်လောက်ရှိပါတယ်. ဒီတော့ တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၄၅၀၀ နီးပါးလောက်ကို ကျွန်တော် ကိုယ့်နည်းကိုယ်ဟန်နဲ့ ရှာဖွေရမှာပါ.
အိမ်ကစထွက်လာတော့ ကျောင်းစရိတ်ရဖို့ နေနေသာသာ၊ လေယာဉ်လက်မှတ်ဖိုးအတွက်တောင် ကျွန်တော် ပိုက်ဆံချေးခဲ့ရပါတယ်. ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ၀န်အလေးဆုံးအရာက ပိုက်ဆံချေးရတာပါပဲ. ကျွန်တော် ရှေ့မျက်နှာနောက်ထားပြီး အဲဒီ့အချိန်တုန်းက ကိုယ့်ဘ၀အပြောင်းအလဲအတွက် ထောင်မြင်ရာစွန့်ဆိုသလို ဒေါ်လာ ၅၅၀၀ ကို လေးနှစ်အကြာမှာ အတိုးရောအရင်းပါပြန်ဆပ်မယ်ဆိုတဲ့ ကတိက၀တ်နဲ့ အပြတ်ချေးခဲ့တယ်. အဲဒီ့အကြောင်းတွေကို "အိုဘယ့်နိုင်ငံခြား" ပို့စ်မှာ ကျွန်တော် တစ်ချို့တစ်ဝက် ရေးပြခဲ့ဖူးပါတယ်.
လေယာဉ်လက်မှတ်ဖိုးနဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် အ၀တ်အစား၊ ခရီးဆောင်အိတ်၊ အသုံးအဆောင် ဘာညာသာရကာတွေ ၀ယ်ပြီးချိန်မှာ ကျွန်တော့်လက်ထဲ ဒေါ်လာ ၄၅၀၀ ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်. အဲဒီ့ပိုက်ဆံကလည်း ကျောင်းကိုရောက်တော့ တစ်ခါတည်းပေးလိုက်ရပါတယ်. ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာ ပညာသင်ဖို့အတွက်ကို အာရုံအပြည့်အ၀ မစူးစိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး. တစ်နေ့တစ်နေ့ ကျောင်းစရိတ်ပိုက်ဆံကို ဘယ်လိုရှာဖွေရမယ်ဆိုတာကိုပဲ အပူတပြင်းစဉ်းစားနေခဲ့ရပါတယ်.
ကျောင်းကိုပေးလိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံ ၄၅၀၀ ကိုဖယ်လိုက်ရင် ကျွန်တော် ထပ်ပေးရမှာက ၃၀၀၀ လောက်ကျန်ပါသေးတယ်. အဲဒါက အလုပ်လုပ်ရင်း ရလာမယ့် လခ ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ နဲ့ ပြန်ချေလိုက်ရင် တစ်နှစ်စာတော့ လောက်နိုင်ကောင်းပါတယ်လို့ ကျွန်တော်တွက်ထားခဲ့တာပါ. ကွက်တိမှ တကယ့်ကို ကွက်တိပါပဲ.
အဲဒီ့အချိန်တုန်းက ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘဏ်အကောင့်မှာ မထည့်မနေရ ထည့်ထားရတဲ့ ဒေါ်လာ ငါးဆယ်လောက်က လွဲရင် အပိုမရှိပါဘူး. နှစ်ပတ်ကို တစ်ခါရှင်းပေးတဲ့ လုပ်အားခကလည်း ကျောင်းကိုပဲ ကျောင်းစရိတ်ပေးဖို့ လုံးဝအတိမ်းအစောင်းမခံ သီးသီးသန့်သန့် စုခဲ့ရပါတယ်.ညသန်းခေါင်ယံ အိမ်စာတွေ ထိုင်လုပ်နေရင်း ဗိုက်ဆာလာလို့ Vending Machine ရှေ့မှာ အာလူးကြော်တစ်ထုပ်ကို တစ်ဒေါ်လာပေးပြီး စားသင့်မစားသင့် အချိန်တော်တော်ကြာအောင် ရပ်စဉ်းစားခဲ့ဖူးရတယ်.
ကျွန်တော် အဲဒီ့တုန်းက သိပ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ ကွန်ပြူတာဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခု ရှိခဲ့ဖူးတယ်. အဲဒါကတော့ Excel ပါ.
Excel Worksheet ထဲမှာ ၀င်ငွေ၊ ထွက်ငွေ၊ တစ်နှစ်စာအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ငွေ၊ ကျောင်းပိတ်ရက်တိုလေးတွေမှာ ဆရာတွေအိမ်က ခေါ်ခိုင်းရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျောင်းသားအချင်းချင်း အကူအညီလိုလို့ ခေါ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သွားကူညီလုပ်ပေးရင် ရတဲ့ ငွေတိုငွေစလေးတွေ စသည်ဖြင့် အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တောင် ဒေါ်လာ ၇၀၀၀ မကျော်တဲ့ ကိန်းဂဏန်းလေးတွေကို ကျွန်တော် ခဏခဏ ကစားနေခဲ့ဖူးပါတယ်.
ဒီတစ်နှစ်အတွက် ကျောင်းစရိတ်ကို ပေးနိုင်ပြီပဲထားဦး. နောက်တစ်နှစ်အတွက် ကျွန်တော်ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမလဲ. ကျောင်းစရိတ်မပေးနိုင်ရင် ကျွန်တော်ကျောင်းဆက်မတက်နိုင်တော့ဘူး. အဲဒါဆိုရင် ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမလဲ. ကျွန်တော့်ရဲ့ အနာဂတ် ဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားမလဲ...
ပွင့်လင်းရိုးသားစွာပြောရရင် ကျွန်တော်သိပ်စိတ်ပူတယ်. ပြီးတော့ ကျွန်တော်သိပ်တုန်လှုပ်နေခဲ့မိတယ်. ဒီတစ်နှစ်ပြီးရင်ကိုပဲ ကျွန်တော့်ကျောင်းသားဘ၀ကြီးက ပြီးဆုံးသွားသလို ခံစားနေခဲ့မိတယ်.
အဲဒီ့နှစ်က ဆောင်းတွင်းက သိပ်ပြင်းလွန်းခဲ့တယ်.
နှင်းတွေ ထူထူထဲထဲကျနေတဲ့ အချိန်မှာ ကျောင်းကိုသွားရတာ၊ အလုပ်ကိုသွားရတာ သိပ်ကိုခက်ခဲစေခဲ့တယ်. ညဖက် အိမ်စာတွေလုပ်နေချိန်မှာ ကျွန်တော် ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပြူတာလေးတစ်လုံးလောက်ရှိရင် သိပ်ကို အဆင်ပြေမယ်လို့ တောင့်တခဲ့ဖူးပါတယ်.
အဲဒီ့အချိန်မှာ မိုးမြင့်မာန်နဲ့ ကျွန်တော်ဖုန်းပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်. သူက ကျွန်တော် ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ပညာသင်ဆုရအောင် ကြိုးစားခဲ့ပုံတွေကို စိတ်ဝင်တစားမေးခဲ့သလို ကျွန်တော် ရှေ့နှစ်ကျောင်းစရိတ်တွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုလည်း မေးပါတယ်.
အဲဒီ့တုန်းက ကျွန်တော် အားငယ်ခဲ့ရဖူးပါတယ်. ဒါပေမယ့် စိတ်တော့ မပျက်ခဲ့ပါဘူး. အကောင်းမြင်စိတ်လေးမွေးပြီးတော့ပဲ ပြန်ဖြေခဲ့ဖူးပါတယ်.
"ငါမသိသေးဘူး သူငယ်ချင်းရာ. နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ငါဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကို ကြည့်ရတော့မှာပဲ" လို့ ပြန်ဖြေခဲ့ဖူးတယ်.
မိုးမြင့်မာန်က အထွေအထူးမပြောခဲ့ပါဘူး. တစ်ခြားအကြောင်းတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်းတွေ၊ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်အကြောင်းတွေ ပြောပြီး ခဏနေတော့ ဖုန်းချသွားပါတယ်.
နောက်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ ကျွန်တော့်နာမည်နဲ့ ကတ်ထူပုံးခပ်ကြီးကြီးတစ်ခုရယ်၊ စာအိတ်လေးတစ်အိတ်ရယ်ကို ကျောင်းက စာတိုက်မှာ သွားရွေးရပါတယ်.
အခန်းထဲရောက်လို့ ကတ်ထူပုံးကြီးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ အထဲမှာ လက်ပ်တော့ ကွန်ပြူတာလေးတစ်လုံးကိုတွေ့ရပါတယ်.
စာအိတ်လေးကိုဖောက်လိုက်တော့ ဒေါ်လာတစ်ထောင်တန် ချက်လက်မှတ်လေးတစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်.
ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲ သူ့ဆီကို ဖုန်းကောက်ဆက်လိုက်တော့ သူက ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ ခပ်ပေါ့ပေါ့လေးပဲ ပြန်ပြောပါတယ်.
"မင်းပြန်ပေးစရာမလိုဘူး. ငါက ပညာဒါနပြုချင်ရုံသက်သက်ပါ. မင်းတစ်နေ့ တတ်နိုင်လို့ ပြန်ပေးချင်ရင်လည်း မင်းလိုပဲ အမှန် တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ လူငယ်တွေကို ဒါနပြုလိုက်ပါ.." တဲ့လေ
လက်ပ်တော့ကိစ္စမေးတော့လည်း မိုးမြင့်မာန်က ကျွန်တော့်ကို ရိုးရိုးလေးပဲ ပြန်ဖြေပါတယ်.
"ငါကတောင် မင်းကို ပြန်အားနာနေတာ. လက်ပ်တော့က အသစ်မဟုတ်ဘူး. အဟောင်း. ပြီးတော့ Pentium 3. မော်နီတာရဲ့ ညာဖက်ထောင့်မှာလည်း အစင်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်နေတယ်. မင်းအတွက် အဆင်ပြေမှပြေ ပါ့မလားလို့တော့ မသိဘူး.." လို့ ပြန်ပြောပါတယ်.
ကွန်ပြူတာလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ နည်းနည်းတော့ နှေးပါတယ်. ဒါပေမယ့် Microsoft Word, Excel ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်တယ်. သီချင်းကောင်းကောင်းနားထောင်လို့ရတယ်. အင်တာနက်သုံးလို့ရတယ်. မော်နီတာမှာ ထင်နေတဲ့အစင်းလေးကို ကျွန်တော့်မျက်စိထဲမှာ အသားကျအောင် ကျင့်ယူပစ်လိုက်တယ်.
မိုးမြင့်မာန်ကို ကျွန်တော်စကားတွေ အများကြီး ထပ်မပြောခဲ့ပါဘူး. ရိုးရှင်းစွာနဲ့ တစ်လုံးချင်းပြန်ပြောခဲ့တာတော့ ရှိတယ်.
"Thank you so much, man! I will give you back one day.."
သူ့အတွက်တော့ ဘာမှမဟုတ်လောက်တဲ့ အကူအညီလေးတစ်ခုပါလို့ သူပြောခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ သိပ်ကိုလိုအပ်နေချိန်မှာ အဆင်ပြေသွားစေခဲ့လို့ လိုအပ်ချက်ကြောင့် အဖိုးသိပ်တန်တဲ့ အကူအညီတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်..
အဲဒီ့ညက ကျွန်တော့်ဒိုင်ယာရီထဲမှာ မိုးမြင့်မာန်ဆိုတဲ့ နာမည်တစ်ခုကို ရေးချခဲ့တယ်. ပြီးတော့ "တစ်နေ့ လူကိုယ်တိုင်တွေ့ရန်" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်က လူတွေထဲမှာ ပေါင်းထည့်လိုက်တယ်. သူ့နာမည်ဘေးနားမှာ ဒေါ်လာ တစ်ထောင်ကိုလည်း မင်နီနဲ့ ရေးထားခဲ့လိုက်တယ်.
လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်ကတည်းက ကျွန်တော်သူ့ပိုက်ဆံကို ပြန်ပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိခဲ့ပါတယ်. စာတိုက်ကနေ လွှဲရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူ့အကောင့်ထဲကို လွှဲရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်သူ့ကို လူကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီး ကျေးဇူးစကားပြောချင်စိတ်တွေ ရှိနေခဲ့တယ်. လူကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီး ဒေါ်လာတစ်ထောင်ကို သူ့လက်ထဲကို ထည့်ပေးချင်စိတ်တွေ ဖြစ်နေခဲ့တယ်.
ကျွန်တော်သိပ်သွားချင်နေခဲ့တဲ့ အိပ်မက်ထဲက တံတားကြီးတစ်စင်းကလည်း ကယ်လီဖိုးနီယားမှာ ရှိနေခဲ့တယ်.
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ကယ်လီဖိုးနီးယားကို သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဟာ သာမန်ခရီးစဉ်တစ်ခုဆိုတာထက် ကျွန်တော့်ဒိုင်ယာရီထဲက အိပ်မက်စာမျက်နှာလေးတွေကို အသက်သွင်းလိုက်တာဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်.
မိုးမြင့်မာန်ကို ကျွန်တော်လာလည်မယ့် အကြောင်းရယ်၊ ကျွန်တော်သွားချင်တဲ့ အထင်ကရနေရာတွေရယ်ကို ပြောပြလိုက်တော့ သူလည်း စိတ်ဝင်စားပြီး လိုက်ချင်တယ်လို့ ပြောလာပါတယ်.
ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲ သူ့အတွက် လက်မှတ်တစ်စောင် ထပ်ဆောင်းဝယ်လိုက်ပါတယ်.
သူလည်းသိပ်ပျော်သွားပါတယ်. ကျွန်တော်လည်း သိပ်ကိုကျေနပ်ပျော်ရွှင်သွားခဲ့ရပါတယ်.
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ စာမျက်နှာလေးတွေ အဲဒီ့နေ့က ရုပ်လုံးကြွလာခဲ့တာကို ကျွန်တော်နှစ်ခြိုက်လွန်းစွာ ထိုင်ငေးကြည့်နေခဲ့မိတယ်.
များလည်းသွားချင်တယ် ဒါပေမယ့်ခေါ်တောင်မခေါ်ဘူး ရက်စက်တယ်... ဟင့်
ကိုရန်အောင် ပြန်လာပြီပေါ့။ ဘလော့ဆီကို။
ဆက်ရန်လေးကို မျှော်နေပါတယ် ကိုရန်အောင်။
အိပ်မက် ဆိုတာ ဘဝပဲဗျ...
စိတ်ဝင်တစား ဖတ်သွားပါတယ် ဘရားသား။
ဒီပို့စ်လေးဖတ်ရတာ ကျနော့်ကောင်းကင်ကြီးတောင် ညို့မှိုင်းမှိုင်း ဖြစ်သွားတယ်...ဆက်ပါဦးဗျာ..
ကောင်းခန်းမှာ ရပ်လိုက်တော့ ဖတ်ရသူက
ဒီလိုမိတ်ဆွေကောင်းမျိုးကတော့ ဘ၀မှာ ဘယ်တော့မှ မမေ့သင့်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေပါဘဲနော်...
ကျေးဇူး မမေ့သောသူနဲ့ ကျေးဇူးပြုသော သူ၂ဦးလုံးကိုပါ။
ကျွန်တော် အောင်မြတ်ဦး ကွန်ပျူတာအကြောင်းဖတ်သွားတယ်နော် ကိုရန်အောင်။
ကျွန်တော်အထူးကျေးဇူတင်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။ အဆင်ပြေနိုင်ပါစေ။ သာယာပါစေ။